Iindaba - Zithini izibonelelo zezibane zezibane ze-LED?
1. Ukucoceka okuphezulu, imibala eqaqambileyo kunye nesityebi. Ii-LED zangoku ziphantse zagubungela yonke imbonakalo ebonakalayo ngombala ophezulu wokucoceka. Kwaye ufumane Indlela yendabuko yokukhanya kombala isibane se-incandescent kunye nefayile, eyanciphisa kakhulu umphumo wokukhanya.
2, inani lokuphila ixesha elide. Ubomi bamathuba e-LED budlula iiyure ezingama-50,000, eziphindaphindwe kaninzi okanye nangamaxesha amashumi emithombo yokukhanya eqhelekileyo.
3. Akukho ukukhanya kwe-ultraviolet kumqadi. I-LED ngumthombo omileyo wokukhanya okukhanyayo, okuluhlaza kunye nokusingqongileyo, ngakumbi kufanelekile kwiivenkile zeempahla, iivenkile zobucwebe, iimyuziyam, iigalari zobugcisa kunye nezinye iindawo ezinobuchule, ezinokwanelisa iimfuno ezizodwa zeemveliso zokukhanyisa.
4.I-luminescence eqinileyo, ukuxhathisa okuhle, eyomeleleyo kwaye ethembekileyo.
5. Ukonga umbane, ukonga, nokungakhuseli, ngesiqhelo ukonga umbane ngama-50% ukuya kuma-80%.
6.Ukulawula umbala onamandla, ukukhanya kunye nobumnyama kunokulungiswa, ukudityaniswa kwemibala emithathu ephambili ye-LED kungasebenzisa iPWM ukugqibezela utshintsho lombala.
I-7, i-LED inesikhokelo esomeleleyo sokukhanyisa ukukhanya, ukusetyenziswa okuphezulu okukhanyayo, kunye nobukhulu obuncinci, kulula ukulawula uyilo lwembonakalo kunye nokusasazeka kokukhanya kwezibane ze-LED.
8. I-LED inokuxhotyiswa ngombane ophantsi we-DC, okhuselekileyo nonokuthenjwa.
9. I-LED ayilawulwa bubushushu benjini, kwaye iqala ngesiqhelo kumbane ophantsi we-110V. Injini ayichaphazeleka lixesha lokufudumeza, kwaye inokuqalwa okwethutyana kwaye ifikelele kwisiphumo esipheleleyo sokukhanya.